"UCoraline" kaNeil Gaiman Othola Ukwelashwa Okusha Kakhulu? - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo "UCoraline" kaNeil Gaiman Othola Ukwelashwa Okusha Kakhulu?
"UCoraline" kaNeil Gaiman Othola Ukwelashwa Okusha Kakhulu?
ebhalwe ngu Waylon Jordan September 22, 2017
Njalo ngonyaka, abalandeli be- AbakwaSimpson ' lindela ngokulangazela uchungechunge lwe-animated 'i-Halloween Extravaganza “I-Treehouse of Horror“. Eminyakeni edlule, sibone konke kusuka The Shining kuya u-Harry Potter thola ukwelashwa kukaSimpson, baguqula izindaba ezesabekayo zakudala emakhanda abo ngenani elilinganayo lokuhleka nenhliziyo. Kulo nyaka, kubonakala sengathi bazobhekana nolunye uhlobo lwakudala ngendlela ye- Neil Gaiman's Coraline!
Omunye wemisebenzi edume kakhulu yombhali, Coraline ilandisa ngendaba yentombazanyana ehamba ngomnyango ongaqondakali bese ithola umhlaba ophambana ngokuphelele nowayo.
Kusukela esithombeni esinikezwe i-Tweet kaGaiman ngezansi, kubukeka sengathi uLisa uzothatha lolu hambo olubi. Umuntu angacabanga nje emuva uBart, uHomer, uMarge noMaggie ngokukhanya okukhohlakele emehlweni abo enkinobho!
Umbhali uthathe kuTwitter ukuthumela lesi sithombe esikhethekile izolo kuphela:
Amehlo okhozi phakathi kwenu futhi angakwazi ukuthola ukuthi iyiphi ifilimu noma indaba ezobe ithola ukwelashwa kweSimpsons Halloween kulo nyaka. pic.twitter.com/PX7gergwuo
Lokhu kungukuqala kokuqala esibe nakho ngalokho isiqephu salo nyaka se-Treehouse of Horror esisigcinele khona, kepha qhubeka ubheke emuva njengoba sizothumela izindaba eziningi ngesiqephu sakamuva se-Halloween njengoba imininingwane ivela!
Isikhathi esisha se- AbakwaSimpson ' kulindeleke ukuthi iqale ukubonwa ngoSepthemba 29 2017 njengoba iqhubeka nokuqopha amarekhodi ochungechunge olude kakhulu olusebenza kuthelevishini. Le sizini imaka u- # 29 wombukiso opopayi oqale njengochungechunge lwezikhindi ku- “The Tracey Ullman Show” ngawo-1980.
CoralineNeil Gaimanindlu yezihlahla ezethusayo
UHeather Langenkamp Ubuyela 'Ngeqiniso noma Ngokuqina'
Izithombe Ezintsha ze-'The Exorcist: Isahluko 2 'Zenze Izinto Ziku-Inthanethi